डोनाल्ड ट्रम्पले भने– कमला ह्यारिस एक डरलाग्दो पात्र हुन् Canada Nepal
काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीयमूलकी कमला ह्यारिसलाई अमेरिकन सिनेटको सबैभन्दा ‘डरलाग्दो’ सदस्य भएको बताएका छन्। उनले आगामी चुनावमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठेका जो बाइडेनले उपराष्ट्रपति पदको लागि एसियाली महिला कमला ह्यारिसको नाम अघि सारेपछि ट्रम्पको कडा टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो ।
ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले प्राथमिक चुनावमा डेमोक्रयाटिक पार्टीबाट आफ्नो प्रतिस्पर्धी बनेकी कमलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने बाइडेनको व्यहावरले आफू छक्क परेको बताए । कमला ह्यारिसले प्राथमिक चुनावमा डेमोक्रयाटिक पार्टीबाट बाइडेनसँग राष्ट्रपति पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।
अन्ततः प्राथमिक चुनावमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा बाइडेनले जिते । बाइडेनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा जितेपछि उपराष्ट्रपतिका लागि कमलाको नाम घोषणा गरिएको हो । बाइडेनले कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिका लागि छनोट गर्दा आफू छक्क परेको भन्दै ट्रम्पले भने, ‘म कुनैपनि चिजले यति हैरान भएको थिइन्, जति कमला ह्यारिसको चुनावी कार्यक्रमले भएको थिएँ ।’
त्यसैगरी सन् २०१८को सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ब्रेट कभानाको सिनेट कन्फर्मेसन सुनुवाईको बेला कमला ह्यारिस अमेरिकी सिनेटमा सबैभन्दा निकृष्ट, डरलाग्दो र कसैको पनि सम्मान नगर्ने व्यवहार देखाएको ट्रम्पले आरोप पनि लगाए ।
श्रावण २८, २०७७ बुधवार २०:५६:०६ बजे : प्रकाशित
# आगामी चुनावमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार
क्यानवेरा, सिन्ह्वा - अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्नो देशले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गरेमा खोप विकासबारे प्राप्त हुने जानकारी अन्य मुलुकसँग बाँड्ने घोषणा शनिबार गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ खोप परीक्षणमा हुने कुनै पनि खोजलाई बाँड्न प्रतिवद्ध छ । प्रभानमन्त्री मोरिसनले भन्नुभयो, “जसले खोप भेट्टाउँछ उसले यसलाई बाँड्नै पर्छ । विश्वव्यापी महामारी अन्त्यको लागि व्यापक साझेदारी नैतिक जिम्मेवारी हो ।”
“अष्ट्रेलियाको धारणा स्पष्ट छ । यदि हामीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पत्ता लगायौँ भने हामी सहकार्य गर्नेछौ । विश्वव्यापी महामारीलाई अन्त्य गर्न यो वाचा हामी सबैले गर्नुपर्नेछ,” उहाँले थप्नुभयो ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार २०:०९:४२ बजे : प्रकाशित
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री सुगाबीच टेलिफोन वार्ता
नयाँ दिल्ली, सिन्ह्वा - भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
सो विज्ञप्तिका अनुसार उहाँहरुबीच शुक्रबार फोनवार्ता भएको थियो । त्यस वार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जापानी प्रधानमन्त्री सुगालाई बधाई दिनुभएको थियो । सुगा जापानको प्रधानमन्त्रीमा हालैमात्र निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले जापानी प्रधानमन्त्री सुगालाई कार्यकालको सफलताको कामना गरेर बधाई ज्ञापन गर्नुभएको सो विज्ञिप्तमा जनाइएको छ ।
साथै भारत र जापानबीचको विगत लामो समयदेखिको सम्बन्ध उहाँको कार्यकालमा थप सुदृढ हुने धारणा प्रधानमन्त्री मोदीले राख्नुभएको पनि सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।प्रधानमन्त्री सुगाको कार्यकालमा आगामी दिनमा भारत र जापान आर्थिक तथा अरु पनि धेरै क्षेत्रमा साझेदारी गरेर अघि बढ्ने विषयमा सो फोनमा कुराकानी भएको थियो ।
त्यस वार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जापानी प्रधानमन्त्री सुगालाई अहिलेको कोभिड १९ को महामारी कम भएपछि भारतको भ्रमणका लागि आमन्त्रण पनि गर्नुभएको बताइएको छ ।
त्यस फोनवार्तामा उहाँहरुबीच कोभिड १९ ले पारेको असरका बारेमा छलफल गर्दै यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएका कार्यहरुका बारेमा पनि आपसी अनुभव आदानप्रदान गर्नुभएको थियो ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १४:१५:५२ बजे : प्रकाशित
अमेरिका निर्वाचनको मत सर्वेक्षण, को अगाडि डोनल्ड ट्रम्प कि जो बाइडेन ?
बीबीसी। अमेरिकी मतदाताले आगामी नोभेम्बर २ मा डोनल्ड ट्रम्प र जो बाइडनमध्ये कसलाई आगामी चार वर्षका लागि ह्वाइट हाउस पठाउने भनेर निर्णय गर्नेछन्। रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित पदासीन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
सन् १९७० को दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय बाइडन सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्म बराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति थिए। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मत सर्वेक्षण कम्पनीहरूले मतदाताहरूले कुन उम्मेदवारलाई रुचाएका छन् भनेर सोधिरहेका छन्। हामी यहाँ ती सर्वेक्षणबारे जानकारी दिनेछौँ। हामी तिनले कसले निर्वाचन जित्छ भन्ने विषयमा के कुरा स्पष्ट पार्न सक्छन् र के कुरा स्पष्ट पार्न सक्दैनन् भन्ने पनि बताउनेछौँ।
राष्ट्रिय मत सर्वेक्षणहरूले उम्मेदवारको लोकप्रियता बुझ्न सघाउँछन्। तर तिनकै आधारमा निर्वाचनमा को विजयी हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न उचित हुँदैन। सन् २०१६ को निर्वाचनलाई उदाहरणार्थ लिऊँ। हिलरी क्लिन्टन मतसर्वेक्षणमा अगाडि थिइन्।
डोनल्ड ट्रम्पले भन्दा उनले झन्डै ३० लाख बढी मत पाइन्। तर उनी पराजित भइन्। किनभने अमेरिकामा इलेक्टरल कलेज अर्थात् निर्वाचक मण्डल प्रणालीबाट निर्णय हुन्छ। त्यसैलै धेरै मत आउँदैमा निर्वाचन जितिन्छ भन्ने छैन।यो कुरा एकातिर राखौँ। देशव्यापी मतसर्वेक्षणहरूमा वर्षको अधिकांश समय डोनल्ड ट्रम्पभन्दा जो बाइडन अगाडि देखिएका छन्।
केही सातायता ५० प्रतिशत मतदाताले उनलाई रुचाएको देखिएको छ। कहिलेकाहीँ त उनी १० अङ्कले अग्रता लिन्छन्। यसविपरीत सन् २०१६ मा सर्वेक्षणहरू त्यति धेरै स्पष्ट थिएनन्। निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा बेलाबेलामा ट्रम्प र क्लिन्टनबीच केवल दुई प्रतिशतको भिन्नता देखिएको थियो।
कुनकुन राज्यले निर्वाचनको छिनोफानो गर्छन्?
गत निर्वाचनमा क्लिन्टनले मतको सङ्ख्याभन्दा स्थान महत्त्वपूर्ण हुने पत्तो पाइन्। अधिकांश राज्यमा सधैँ उसैगरी मतदान हुन्छ। अर्थात् केही सीमित राज्यमा दुवै उम्मेदवारसँग जित्ने सम्भावना हुन्छ। ती राज्यसँग कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने क्षमता हुन्छ। तिनलाई 'ब्याटलग्राउन्ड स्टेट' अर्थात् कडा प्रतिस्पर्धा हुने राज्य भनिन्छ।
अमेरिकामा इलेक्टरल कलेज प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतिको चयन हुन्छ। सबै राज्यलाई तिनको जनसङ्ख्याका आधारमा केही मत दिइएको हुन्छ। यो प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचक मण्डलमा कुल ५३८ मत हुन्छ। निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले २७० मत बटुल्नुपर्छ।
माथिको नक्साले सङ्केत गरे जस्तै कडा प्रतिस्पर्धा हुने केही राज्यसँग अन्यत्रभन्दा निर्वाचक मण्डलको धेरै मत हुन्छ। तसर्थ उम्मेदवारहरूले प्रायः ती राज्यमा लामो समय निर्वाचन अभियान चलाउँछन्।
अहिले ब्याटलग्राउन्ड भनिने राज्यहरूमा जो बाइडनको स्थिति राम्रो देखिएको छ। तर अझै समय बाँकी छ र स्थिति तीव्र गतिमा फेरिन सक्छ। झन् डोनल्ड ट्रम्प आफैँ संलग्न भएको निर्वाचनमा।
सर्वेक्षणहरूका अनुसार मिशिगन, पेन्सलभेनिया र विस्कन्सनजस्ता तीन औद्योगिक राज्यमा बाइडनसँग ठूलो अग्रता छ। गत निर्वाचनमा त्यहाँ ट्रम्प एक प्रतिशतभन्दा कम मतान्तरले विजयी भएका थिए। तर सन् २०१६ मा ट्रम्प ठूलो मतान्तरले विजयी भएका ब्याटलग्राउन्ड राज्यहरूमा उनको निर्वाचन अभियान टोली बढी चिन्तित हुने देखिन्छ।
आईअवा, ओहायो र टेक्ससमा आठदेखि १० प्रतिशत मतान्तरले उनी विजयी भएका थिए। तर अहिले तीनवटै राज्यमा बाइडन र ट्रम्पको उस्तै स्थितिमा देखिएका छन्। सर्वेक्षणले गर्ने सङ्केत अङ्कले ट्रम्पले किन जुलाईमा आफ्नो निर्वाचन अभियानका प्रबन्धक फेरे र उनी किन बारम्बार "मिथ्या सर्वेक्षण" भन्ने गर्छन् भन्ने बुझाउँछ। बाजी थाप्नेहरू अझै पनि ट्रम्पलाई पन्छाइहाल्ने पक्षमा छैनन्। अहिले पनि उनीहरू ट्रम्पले निर्वाचन जित्ने एकतिहाइ सम्भावना देख्छन्।
के कोरोनाभाइरसले ट्रम्पको अङ्कगणितलाई प्रभाव पारेको छ ?
यो वर्षको आरम्भदेखि नै अमेरिकामा कोरोनाभाइरस महामारीबारे समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशित भएको छ। अनि राष्ट्रपति ट्रम्पको गतिविधिबारे दलगत आधारमा भिन्नभिन्न प्रतिक्रिया आएको छ। मध्यमार्चमा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेर राज्यहरूलाई कोरोनाभाइरस महामारीन नियन्त्रण गर्न ५० अर्ब डलर उपलब्ध गराएपछि उनको लोकप्रियता उत्कर्षमा पुगेको थियो।
त्यो बेला ५५ प्रतिशत अमेरिकीहरूले उनको कामलाई अनुमोदन गरेको इप्सस नामक मतसर्वेक्षण कम्पनीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। तर त्यसपछि उनले डेमोक्र्याटहरूबाट प्राप्त समर्थन गुमाए। तर रिपब्लिकनहरूले समर्थन गरिराखे। ताजा विवरणअनुसार अहिले उनका आफ्नै समर्थकले दक्षिणी र पश्चिमी राज्यहरूमा कोरोनाभाइरस महामारी फेरि फैलिएपछि ट्रम्पले गरेको कार्यबारे प्रश्न उठाएका छन्।
जुलाई महिनाको आरम्भतिर उनलाई रिपब्लिकनहरूको समर्थन झरेर ७८ प्रतिशत भएको थियो। यसले उनी किन कोरोनाभाइरससम्बन्धी विषयप्रति आशावादी छैनन् र स्थिति अझै बिग्रिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् भन्ने बुझाउन सक्छ।
केही समयअघि उनले पहिलो चोटि मास्क लगाए अनि देशवासीहरूलाई पनि त्यसै गर्न आग्रह गरे। मास्क प्रभावकारी हुने भन्दै उनले सबैलाई "राष्ट्रप्रेम" देखाउन भने। यूनिभर्सिटी अफ वाशिङ्टनका विज्ञहरूले निर्वाचनको दिनसम्म अमेरिकामा मृतकको सङ्ख्या २,५०,००० नाघ्ने अनुमान गरेका छन्।
सन् २०१६ मा मत सर्वेक्षणहरूले गरेको सङ्केत मिलेन भनेर तिनलाई खण्डन गर्न सजिलो छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार त्यसै गर्ने गरेका छन्। तर यो पूर्णतः सत्य हैन।
अधिकांश राष्ट्रिय मत सर्वेक्षणहरूले हिलरी क्लिन्टन केही प्रतिशतले अगाडि भएको देखाएका थिए। तर यसको अर्थ उनीहरू असत्य थिए भन्ने हैन। उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा ३० लाख बढी मत ल्याएकी थिइन्।
सर्वेक्षकहरूले सन् २०१६ मा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका मतदाताहरूको प्रतिनिधित्व राम्ररी गराउन सकेका थिएनन्। तसर्थ कडा प्रतिस्पर्धा हुने केही राज्यमा ट्रम्पलाई हुने फाइदा पत्ता लाग्न सकेको थिएन। अहिले अधिकांश मत सर्वेक्षण कम्पनीहरूले यो गल्ती सच्याइसकेका छन्।
तर यो वर्षको स्थिति कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सामान्य अवस्थाको भन्दा अनिश्चित छ। अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र मानिसहरूले नोभेम्बरमा कसरी मतदान गर्छन् भन्ने पनि अनिश्चित छ। त्यसैले निर्वाचन हुन धेरै दिन बाँकी भएकाले मतसर्वेक्षणहरूलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्छ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १३:४६:३५ बजे : प्रकाशित
# राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प
# अमेरिका निर्वाचन
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुगाले भने, क्षेत्रीय स्थायित्वको लागि जापान-चीन सम्बन्ध आवश्यक
काठमाडौँ। जापानका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री योशिहिदा सुगाले जापान-चीन सम्बन्धका लागि क्षेत्रीय स्थायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सुगाले शुक्रवार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ सँग शिखर बैठक सहित उच्चस्तरीय वार्तामा मिलेर काम गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए। यद्यपि, सिको जापानमा राजनीतिक भ्रमणको बारेमा छलफल नभएको, सुगाले बताए।
सुगाले फोनमा वार्ता गरेपछि पत्रकारहरूलाई भने, 'मैले सिलाइ जापान र चीन सम्बन्धको स्थायित्व दुई देशलाई मात्रै नभएर एसियाली क्षेत्रलाई धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।' उनले यस सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि फाइदा पुग्ने बताए।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार १०:३२:५४ बजे : प्रकाशित
# जापान-चीन सम्बन्ध
# प्रधानमन्त्री सुगा
विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ९३ हजार नाघ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशमा कति संक्रमित र मृत्यु ?
यस्तै वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभरमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९ लाख ९३ हजार ४ सय ६२ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ३ करोड २७ लाख ६२ हजार ७ सय ९० पुगेको छ । यस्तै विश्वभरमा कोरोनाबाट संक्रमण भएका २ करोड ४१ लाख ७४ हजार ८ सय ६६ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
हालसम्म अमेरिकामा मात्र कोरोनाको संक्रमणबाट २ लाख ८ हजार ४ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ७२ लाख ४४ हजार १ सय ८४ पुगेको छ ।
त्यस्तै ब्रजिलमा कोरोनाको संक्रमणबाट मुत्यु हुनेको संख्या १ लाख ४० हजार ७ सय ९ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ४६ लाख ९२ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ ।
त्यस्तै अर्को देश रसियामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २० हजार ५६ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ११ लाख ३६ हजार ४८ पुगेको छ ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार ०९:४२:३२ बजे : प्रकाशित
युक्रेनमा सैनिक विमान दुर्घटना, २२ जनाको ज्यान गयो
काठमाडौं – युक्रेनमा सैनिक विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ।
युक्रेनको पूर्वी शहर खार्किभमा भएको उक्त सैनिक विमान दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा अधिकांश वायु सेनाका प्रशिक्षार्थी जवान रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले जनाएका छन् ।
२७ जना सवार रहेको उक्त विमान दुघर्टनामा २२ जनाको मृत्यु भएको हो भने दुई जना घाइतेको उद्धार गरिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै हराइरहेका अन्य तीन जनाको खोजी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले जनाएका छन् । विमान के कारणले दुर्घटनाद भएको हो भन्ने बारे छानविन गर्न समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
आश्विन १०, २०७७ शनिवार ०९:१२:४६ बजे : प्रकाशित